चीनमा नेपालको भाउ कति? - राजनीति - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
| २४ मंसिर २०७५, सोमबार
चीनमा नेपालको भाउ कति?
लक्ष्मी लम्साल बेइजिङ साउन २५
बेइजिङमा माओको समाधिस्थलमा पुष्पगुच्छा चढाउन अघि बढ्दै प्रम ओली
नेपालका दलहरू आआफ्नो राजनीतिक स्वार्थ अनुरूप कुनै देशसँग बाँस झैं निहुरिएर सम्बन्ध गाँस्छन् भने अर्को देशसँग सगरमाथा नै छुने गरी ठड्याउँछन्।
हरेक वर्ष चीनका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री लगायत उच्चपदस्थ सरकारी प्रतिनिधिहरूको विदेश यात्रा चलिरहेको हुन्छ। यो दौडधुप नेपालका नेताहरूले गरेको भए, परिवार र नातागोतासहित निस्कन्थे र ‘ विदेश शयर’ गरेको भनेर आलोचना पनि खप्टिन्थ्यो। कहिलेकाहीं त्यस्तै दृष्टान्त पनि देखिन्छ। तर चिनियाँ पदाधिकारीको वैदेशिक दौड भने निःसन्देह देशको कूटनीतिक जोडघटाउमा केन्द्रित हुने गर्दछ।
चीनका राष्ट्रपतिले प्रत्येक वर्ष कुनै देशमा गर्ने भ्रमणबाट प्राप्त कूटनीतिक सफलतालाई चीनले उपलब्धीको रूपमा लेखाजोखा गर्ने गर्दछ र भविष्यमा ती देशसँगको सम्बन्ध प्रगाढ हुने गरी पच्छ्याउने पनि गर्दछ। त्यसको फलोअपका रूपमा चिनियाँ नेताहरूले भेटेर वा टेलिफोन गरेर विगतका मतैक्यताहरूबारे सम्झाउने गरेका हुन्छन्। चीनमा योजनावद्ध रूपमा कूटनीतिक उतारचढावहरूको मूल्यांकन र समीक्षा हुने गर्दछ।
पश्चिमा पात्रो अनुसार सन् २०१८ शुरू भएसँगै चीनले आफ्ना परियोजना सफल पार्नका लागि पनि कूटनीतिक रफ्तार बढाइरहेको छ। आधा वर्ष पार भैसक्दा चीनले कूटनीतिक सम्बन्ध तीब्र पारेको छ।
सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) को ५औं वार्षिकोत्सव आउनै लाग्दा चीनले कूटनीतिक निकटतामार्फत् प्रचूर समर्थन जुटाउन खोजिरहेको छ। आफूले चालेको अभियानमा विश्वलाई एकाकार गराउन चीनले गर्ने अर्थपूर्ण भेटघाट र अवधारणाको फैलावटले निर्दिष्ट लक्ष्यमा पुग्न भूमिका खेल्दछ।
बेल्ट एण्ड रोड परियोजनालाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको विधानमा समेटेर चीनले कूटनीतिको एउटा पाटोको रूपमा समाविष्ट गरेको छ। गत वर्षको कात्तिकमा सम्पन्न चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १९औं महाधिवेशनबाट बीआरआई पार्टी विधानमा समेटिएपछि विश्वको कूटनीतिक ध्यान चीनतर्फ आकर्षित हुनुपर्ने अर्को कारण बनेको छ।
यस वर्षको सुरुमै युरोपेली मुलुकका नेताहरूले पटक पटक गरी बेइजिङ प्रशासनिक केन्द्रको बाटो ताके। गत अप्रिल महिना अर्थात् जेठ २६ गते चीनका राष्ट्रपति सी र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच छिङताउमा दोश्रोपटक भेटवार्ता भयो। वुहान भेटपश्चात् एक महिनाका बीचमा भएको दोश्रो भेटवार्तापछि चीन–भारत सम्बन्ध सुधारोन्मुख हुँदै गएको अनुमान गरिएको छ। चीनले बीआरआई अभियानमा भारतलाई समेट्न अनेकन प्रयास गरिरहेको यो एउटा संकेत पनि हो। त्यति मात्रै नभएर सीमा विवाद टुंग्याउने र अफगानिस्तानमा संयुक्त परियोजना संचालन गर्नेबारे त्यो भेटको अर्थ थियो। वैशाख ११ को वुहान भेटपछि मोदीले नेपालको भ्रमण गरेका थिए।
चीनको वुहानमा मोदी र सी
क्षेत्रीय समस्याहरू शान्तिपूर्ण वार्ताद्वारा निदान गर्नकै लागि सय दिनभित्रमा चीन र उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उनबीच तीनपटक भेटवार्ता भयो। सर्वविदितै छ, चीनको प्रयासले कोरियाली प्रायद्वीपको समस्या समाधान उन्मुख छ। गत मार्चमा अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता हुनुअघि र भेटवार्तापछि पनि किमले चीनको भ्रमण गरेका थिए। असार ५ मा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीनको भ्रमण गर्दा किम पनि बेइजिङमै थिए।
यसै ग्रीष्ममा चीन र रुसका राष्ट्र प्रमुखबीच आदान–प्रदान भयो। सन् २०१८ को जनवरी ८ अर्थात् गत वर्ष माघमा फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्मान्योल म्याक्रोनले चीनको त्रिदिवसीय राजकीय भ्रमण गरे, जो यस वर्ष चीन भ्रमण गर्ने पहिलो विदेशी राष्ट्रनायक बने। त्यसपछिका एक महिनामा अर्थात् जनवरी ३१ देखि फेब्रुअरी २ तारिखसम्म बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले चीनको यात्रा गरिन्।
नेदरल्याण्डका राजा विलियम अलेक्जेण्डर र रानी म्याक्सिमाले गत जनवरीको पहिलो साता चीनको भ्रमण गरे। यी सबै भ्रमणबाट यूरोपेली मुलुकहरुले नयाँ कालमा चीनको नयाँ अवस्था र नयाँ अवसरप्रति उच्च नजर पुर्‍याएको प्रतीत हुन्छ।
चीनका छिमेकी मुलुक भारत, उत्तर कोरिया र रुसका राष्ट्र प्रमुखसँगको भेटवार्ताबाट चिनियाँ कूटनीतिले वरिपरिका क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण प्रभाव पारेको भान हुन्छ। त्यसका अलावा पोआउ एशियाली मञ्च, एशिया–अफ्रिका भ्रमण लगायत गतिविधिमा राष्ट्रपति सीले चिनियाँ अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन्। चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ्ग यीका विचारमा सीको कूटनीतिक यात्रा महत्वपूर्ण र रणनीतिक महत्वको हुने गरेको छ, जसको प्रतिष्थापन अन्य तरीकाबाट सहज छैन।
गत असार ५ गतेदेखि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि चीनको भ्रमण गरे। त्यसको कूटनीतिक उचाइ कत्तिको थियो भन्ने कुरा समयले लेखाजोखा गर्ने नै छ। दोस्रो पटक देशको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हाल्दा भारतपछि ओलीको गन्तव्य चीन थियो। विश्लेषकहरूका अनुसार उनको दुवै देशको भ्रमण सन्तुलित रह्यो। तर नेपालका राजनीतिक दलहरूले छिमेकी मुलुक हेर्ने दृष्टि समान छैन। तसर्थ नेपालमा जुन पार्टीको सरकार सत्तामा पुग्छ, उसको कूटनीति दलीय आस्था अनुरूप ढल्किएको देखिन्छ। त्यसैले त जुनै सरकार सत्तासीन भएपनि कुनै न कुनै तप्काका नेपालीको मन त कुँडिएकै हुन्छ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली पनि देशविदेशमा कूटनीतिक सम्बन्ध सुमधुर बनाउन लागिपरेकै छन्। तर अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले विदेशप्रति ठोस तथा एकरूपको धारणा बनाउनेतर्फ प्रयास गरेको देखिँदैन। नेपालजस्तै बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था भएको भारतमा जुनसुकै दल सत्तामा पुगेपनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा एकरुपता देखिन्छ। नेपालमा दलहरू आआफ्नो राजनीतिक स्वार्थ अनुरूप कसैसँग बाँस झैं निहुरिएर सम्बन्ध गाँस्छन् भने अर्कोसँग सगरमाथा नै छुने गरी ठड्याउँछन्। यी दुवै प्रवृत्ति प्रत्युत्पादक हुन् भनेर बहस भएको पनि लामो समय भैसक्यो।
नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध १५९ राष्ट्रहरूसँग छ। कूटनीतिक सम्बन्ध भनेको कुनै एक देशले अर्को देशसँग हातेमालो गर्नका लागि वातावरण बनाउने सेतु हो, लेनदेनमा सहजता हेतु हो। त्यसका लागि राम्रो र सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्धले भूमिका निर्वाह गर्दछ। सम्बन्धित देशप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण पनि हुने गर्दछ।
नेपालको कूटनीतिले चीनमाथि ठूलो महत्व राख्ला, नराख्ला तर नेपाल यस्तो रूपमा प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ जतिखेर चिनियाँ कूटनीतिले पनि भाउ दिन थालोस्। त्यस्तो भाउ पाउनका लागि नेपालले पनि सन्तुलित कूटनीतिको व्यवहारिक अभ्यास गर्दै जानुपर्छ।
नेपालले दुवै छिमेकी मुलुकबाट धेरै ठूला अवसरहरू हासिल गर्नसक्थ्यो तर कूटनीतिक कमजोरीले गर्दा रित्तो हात हुनुपरेको धेरै उदाहरण छन्। नेपालले कसरी अन्य देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राखेर सदासयता कमाउने भन्ने कुरा उत्तरी छिमेकीसँग पनि सिक्न सक्छ। यो समयको माग हो कि जतिसुकै सरकार बदलिए पनि कूटनीतिक धारणा एउटै बनाइराख्नुपर्छ। त्यसको माग लामो समयदेखि भैरहेको हो, ठूलो बहुमतीय सरकारले त्यस दिशामा केही पहल गर्नसके राष्ट्रको हितमा कामयावी हुनेछ।
प्रकाशित २५ साउन २०७५, शुक्रबार | 2018-08-10 09:57:57
नेपाली सेनालाई चीनले दियो दुई अर्ब ५३ करोड सहयोग
सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई एउटै नाम ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) नामक दुई पार्टी कसरी दर्ता भए भनेर सोधेको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तराईका बिखन्डनवादी र पहाडमा अतिवादी सल्बलाउनु गणतन्त्रको लागि खतरा भएको बताएका...
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सञ्चारमाध्यमहरु गैर जिम्मेवार बन्दै गएको भन्दै सञ्चार क्षेत्रको आलोचना गरेका छन्। सरकार प्रत्येक...
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७५ प्रमाणीकरण गरेकी छिन्।
द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय दिन आफू प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्।